Isbitaalka Beledweyne oo qarka u saaran inuu xirmo iyo wasiiro booqday - Horseed Media • Somali News
November 5, 2019Somali News
Isbitaalka Beledweyne oo qarka u saaran inuu xirmo iyo wasiiro booqday
by Ayub Ali
“ Waxaan kormeer ku tagay isbitaalka guud ee gobolka Hiiraan oo dhallinyaro isku xilqaamay ay ku guda jiraan sidii biyaha dhex fadhiya looga saari lahaa si bulshadu ay isbitaalka uga helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran ayuu yiri ”
Wasiir Goodax Barre.
Sidoo kale wasiirka ayaa ugu baaqay cid kasta oo gacan ka geysaneysa ololaha biyaha looga saarayo isbitaalka ay soo dhaweynayaan ,isla markaana garab la siindoono.
Xaalada Magaalada Baladweyne ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ay mid aan wanaagsaneyn, waxaana saakay markale xirmay garoonka diyaaradaha, kadib roob mudo ka badan 8 Saacadood ka da’ayay magaaladaas.
Lebanon: Kimikalka Qaraxii Beyruut waxaa loo waday dalka Mozambique!
DIGNIIN: Wasaaradda Gargaarka Oo Sheegtay Inay Roobab Iyo Dabeylo Kusoo Wajahan Yihiin Dalka
Madaxweyne Deni Oo Gaaray degmada Saaxo
Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Tacsiyeeyey Geerida Drs. Xaawa Dhiblaawe
Lebanon: Khasaaraha Qaraxii Beyruut oo sare usii kacay